Mareykanka Oo Hoggaamiyeyaasha Soomalida Uga Digay Rabshado... - Wararka Maanta
Home/Warka Caalamka/Mareykanka oo hoggaamiyeyaasha Soomalida uga digay rabshado…
Mareykanka oo hoggaamiyeyaasha Soomalida uga digay rabshado…
Siihayaha Wakiilka dowladda Mareykanka u qaabilsan Qaraamda Midoobay Richard Mills, ayaa sheegay in muhiimad weyn ay leedahay in la xaqiijiyo hanaanka doorashooyinka Soomaaliya.
Richard Mills oo hadal ka jeediyay shirka Golaha Ammanka ee Qaramada Midoobay ayaa ugu baqay hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay xal deg deg ah ka gaaraan arrimaha doorashooyinka kana Shaqeeyaan Nabadda dalkooda.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in shaqaaqooyinkii ka dhacay 19-kii Bishaan Muqdisho ay horseedi karto halis kale iyo in wadanka hubinti la’aan kale,taasina uusan aqbaleyn Mareykanka.
Siihayaha Wakiilka dowladda Mareykanka u qaabilsan Qaraamda Midoobay Richard Mills ayaa ugu baqay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo & Maamul Goboleedyada inay qaadaan tallaabo deg deg ah oo xal looga gaarayo doorashooyinka si looga badbaado halis soo wajahda dadka Soomaaliyeed.
Hadalka Richard Mills Siihayaha Wakiilka dowladda Mareykanka u qaabilsan Qaraamda Midoobay oo aad u dheeraa ayaa waxaa uu sidoo kale ku sheegay in Al-Shabaab ay yihiin halis weli kajirta Soomaaliya, waxaana uu soo jeediyay in saddex kamid ah hoggamiyeyaasha Al-Shabaab lagu daro liiska waxa loogu yeero Argagaxisada, kuwaas oo kala ah, Abuukar Cali Aadan, Macalin Aadan iyo Mahad Karate.
Warkaan kasoo baxay dowladda Mareykanka ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli weli aan wax heshiis rasmi ah ana laga gaarin doorashooyinka Soomaaliya, isla markaana dhawaan shaqaaqooyin salka ku haaya doorashada ay ka dhaceen Magaalada Muqdisho.
digay hoggaamiyeyaasha Mareykanka rabshado Soomalida uga
Beesha Caalamka oo siwadajir ah u diiday muddo kordhinta Farmaajo – Radio…
Jarmalka oo ka hadlay muddo kordhinta loo sameeyay dowladda – Wararka Maanta:…
RW Suudaan oo ka baaqday kulan looga hadlayo Muranka Dhismaha Biyo-xireenka -…
Maraykanka oo ciidammadiisa kala baxaya Afghanistan – Wararka Maanta: Somali News…
Madaxweynaha Afghanistan oo ku dhawaaqay xabad joojin – Wararka Maanta: Somali…
Mareykanka oo bilaabay baaritaanka weerarkii Al-Shabaab ee Manda Bay – Radio…
Golaha Ammaanka oo Afar qodob kasoo saaray xaaladda...
Amar la dul dhigay Donald Trump - Wararka Maanta: Somali News...
Sarakiil iyo Ciidan Ka Soo Goostay Maamulka Puntland oo Somaliland Isu…
Xog: Saadaq Joon oo Muqdisho ka degay xaafad ay ku badan…
Somaliland oo qoraal yaab leh kasoo saartay muddo kororsiga Farmaajo, farriin-na…
DEG DEG: Kulan cadaadis xooggan lagu saarayo Guudlaawe oo Muqdisho ka…
Dalalka beesha caalamka oo qoraal wadajir ah kasoo saaray muddo kororsiga…